एक भेडा चराउने बालिका पछि गएर कसरी बनिन् फ्रान्सको शिक्षामन्त्री ? onlinedarpan.com
Sunday 17th of October 2021 / 05:12:00 AM
एक भेडा चराउने बालिका पछि गएर कसरी बनिन् फ्रान्सको शिक्षामन्त्री ?
अमिइन्स विश्वविद्यालयमा उनले राजनीति विषयमा पढ्न चासो देखाइन् । उच्च शिक्षाका लागि यो फ्रान्सको एउटा विशिष्ट इन्सिच्युट हो । यसपछि उनलाई राजनीतिप्रति बढी चासो हुन थाल्यो । कडा लगन र परिश्रमका कारण सन् २००२ मा उनले पेरिस इन्सिटुट अफ पोलिटिकल स्टडिजमा उनी ग्रयाजुएट भइन् । त्यसपछि उनी समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरिन् । उनले नागरिकका हक अधिकार, सुलभ घर तथा भेदभावविरुद्ध लड्न सुरु गरिन् ।
अन्ततः सन् २०१४ मा उनी शिक्षामन्त्रीमा निर्वाचित भएकी थिइन् । उनी हाल ३८ वर्षकी भएकी छिन् । फ्रान्सको पहिलो महिला शिक्षामन्त्री बन्न उनी सफल भएकी छिन् । नेपालीपत्रबाट साभार